AKAIKIN’NY VAHOAKA AO MAHAJANGA : Feno 18 taona ny niorenan’ny haino aman-jery M3tv-M3fm
Anisany haino aman-jery tena akaiky ny vahoakan’i Mahajanga ny M3tv-M3fm. Tontosa ny zoma 27 oktobra 2017 teo ny lanonana fankalazana ny faha-18 taona niorenan’ny M3tv-M3fm izay notarihan’ny Filoha Tale Jeneraly, Andrianasolo José. 2 novembre 2017
Olo-manan-kaja maro no tonga nanome voninahitra ny fety izay nahitana ny ben’ny tanànan’i Mahajanga sy Ramatoa solombavambahoaka voafidy teto Mahajanga voalohany ary ireo mpiara-miasa akaiky amin’ity onjam-peo sy fahitalavitra mamin’ny vahoaka ity. Raha tsiahivina dia ny 29 oktobra 1999 no nijoro teto Mahajanga ny M3tv-fm.
Maro ireo sedra nolalovany, tao ny nanohana sy nanome fankasitrahana, tao koa anefa ny fanakianana sy ny fampitahorana saingy tsy nataon’ny ekipa nahakivy izany fa vao mainka nentin’ireto farany nanitsiana sy nanatsarana hatrany ny fomba fiasa.
Araka izany dia nampitombo ny fitiavan’ny zanak’i Mahajanga azy ny kalitaon’ny vokatra hoentin’ireo ekipan’ny M3tv-fm ankehitriny noho ireo fandaharana maro samihafa atolony.
Fankasitrahana feno kosa no natolotry ny Filoha Tale Jeneraly ho an’ireo mpiara-miasa izay feno 18 taona niasana teo anivon’ity orinasa ity, toy ny Talen’ny famoahana Jean Yves Belalahy, ny tonian’ny famoahana Tony Josoa ary ny tompon’andraikitry ny fitantanam-bola sy fampandehanan-draharaha, Raboana Aina Lova.
Anisany nampiavaka ity fankalazana ny faha-18 taona ity ihany koa ny fifantenana ireo tovovavy tsara tarehy na ny Miss 18e ka izay lany tamin’izany no miara-miasa amin’ny M3tv-fm mandritra ny herintaona. Tao ihany koa ny fifaninanana sary famantarana sy hira faneva ka izay voafantina tamin’izany dia efa samy nomena ny loka sahaza azy avokoa.
Anisany nampiavaka ny fandaharam-potoana tamin’ity fety fankalazana ity ihany koa ny nanomezan’ny ekipan’ny M3tv-M3fm fanomezana toy ny vary, siramamy, menaka, lafarina, ronono, savony, savony manitra, pates, vatomamy, biskoitra sy zavapisotro mamy tamin’ireo ankizy kamboty tezaina tao amin’ny Centre orphelinat Mangarivotra Mahajanga.
Mbola i filoha Tale Jeneraly, Andrianasolo José hatrany moa no nitarika ny ekipa rehetra teny an-toerana ny harivan’ny alatsinainy 30 oktobra 2017 teo.